In…dar view !!! | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင္ကာ
In…dar view !!!	Posted by mm thinker on December 30, 2008
Posted in: Media.	Tagged: Experience, Media.	အင်း…ဒါဗျူး
မီဒီယာတစ်ခုက ခုတလော ဟိုးလေးတကြော်ဖြစ်နေတဲ့ ဘလော့ဂ် အကယ်ဒမီအကြောင်း အင်တာဗျူးလာတယ်။ ဗျူးပြီးတော့ပြောခဲ့တာတွေ ပြန်သုံးသပ်နေမိတယ်။ အကယ်ဒမီအကြောင်းထက် ဗျူးကြတဲ့အကြောင်း စဉ်းစားမိတာပါ။
ကြုံရသမျှထဲမှာ အတော်လေး အစပ်အဟပ်မတည့်တဲ့ အင်တာဗျူးလို့ပဲ ပြောရမှာပါပဲ။ မဗျူးခင်ကတည်း သင်ကာနဲ့ မြန်မာဘလော့ဂ်ပရက် ဆက်စပ်မှုအနေအထားကို ပြောပြီးသား။ အကြံဉာဏ်လာတောင်းတော့ ပေးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဆက်စပ်လို့ သိခဲ့တာတွေကို ပြောမယ်ပေါ့။ တကယ်လည်းဗျူးရော ဒီဘလော့ဂ် အကယ်ဒမီကြီးကို တာဝန်ယူ ဆုပေးတော့မယ် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအနေနဲ့ ယူဆပုံရပြီးသကာလ အပ်ကျမတ်ကျ မေးနေပါတော့တယ်။
သူမက ကျနော် ဖြေလိုက်တိုင်း သူသိပ်နားမလည်ဘူးဆိုပြီး ပြန်မေးတတ်တယ်။ သူမေးတာက တိုစိစိနဲ့ လိုသလိုဖြေနိုင်တာဆိုတော့ ကိုယ်လည်း လိုသလိုဆွဲဖြေတယ်။ ကိုယ်ဖြေနိုင်တာက အတိုင်းအတာရှိတယ်။ နောက်တော့ သူလိုချင်တဲ့ အဖြေက ဘာဆိုပြီးတော့ ပြန်ကြောင်းပေးတယ်။ ဒီအဖြေမျိုးလိုချင်ရင် သူ့မေးခွန်းက ရှင်းလည်းရှင်း၊ Leading လည်းဖြစ်သင့်တယ်လို့ ဖြေနေရင်းက တွေးမိတယ်။
“မဲဘယ်လိုပေးရမလဲ”ဆိုတာထက် “ဘယ်ဆိုဒ်မှာ လာရောက် ပေးနိုင်မှာပါလဲ၊ ကွန်ပျူတာ၊ အင်တာနက်နဲ့ မနီးစပ်တဲ့ (အထဲက နားဆင်သူတွေ) သိရအောင်ပါ”လို့မေးရင် ကျုပ်က သူဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာ ပိုတည့်အောင် ဖြေပေးနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ မဲဘယ်လို ပေးရမလဲဆိုတော့ ကျုပ်ကလည်း ကွန်ပျူတာဖွင့်ပြီး ဗုဒ်ကို ကလစ်လို့ ဖြေလိုက်တယ်။ မေးတဲ့ မေးခွန်းအတိုင်းပါပဲ။ “ဒါကျနော်တို့ဆိုဒ်ပါဗျာ၊ ဒီကိုလာပါ၊ ဒီမှာပေးပါ”လို့ပြောဖို့ ကျနော့်မှာ တာဝန်မရှိပါ။ အင်တာဗျူဝါအနေနဲ့ မိတ်ဆက်လိုက်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါပဲ။
ဆိုလိုရင်း မရောက်ခင် ဖြတ်ပြောတာကလည်း စိတ်ညစ်စရာကောင်းသလို၊ ဒီလိုဖြေပါဆိုပြီး ပြန်သင်ပေးတာတော့ အတော်ဆိုးပါတယ်။ အင်တာဗျူဝီကို ပြန် Shape လုပ်နေတယ် ထင်မိတယ်။ Shape လုပ်မယ့်အစား ခုနပြောခဲ့သလို Leading Question ကောင်းကောင်းနဲ့ ဆွဲခေါ်သွားရင် ကောင်းမယ် ထင်မိပါတယ်။
အကျိုးဆက်ကတော့ ကိုယ်ပြောနေတာကို (နှစ်ယောက်လောက်) ကြိတ်ရယ်နေတာ ဖုန်းထဲက ကြားနေရတာပါပဲ။ ကျုပ်လည်း စိတ်က အချဉ်ပေါက်လာတယ်။ ဖြေသူ အဆီအငေါ်မတည့်ဘူးဆိုရင်လည်း မေးတဲ့သူ တလွဲဖြစ်နေလို့ နေပါလိမ့်မယ်။ ဂျာနယ်လစ်ဇင် အက်သက်စ်မှာတော့ ဘယ်လို သင်ခဲ့သလဲတော့ မသိပါ။
ကျနော်လေ့လာရေးသားနေတဲ့ “ဘလော့ဂ်နဲ့ သတင်းစီးဆင်းမှု” အကြောင်းမှာ မီဒီယာတွေက ဘလော့ဂ်နဲ့ ဘလော်ဂါတွေကို ဘယ်လို သဘောထားတယ်ဆိုတာ သုံးသပ်ထည့်သွင်းရမယ်ထင်ပါတယ်။
မေးတဲ့အခါ မေးမယ့်အကြောင်းအရာကိုလည်း လေ့လာဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ မျှော်လင့်ထားတဲ့၊ ဘလော့ဂ်လောကကလည်း စိတ်ဝင်စားမဘ့် အဓိက ပွိုင့် တော်တော်များများကို သူမမေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ အင်တာဗျူးဘုရင် လယ်ရီကင်းရဲ့ အင်တာဗျူးကို အပတ်စဉ် အယ်လ်ဂျာဇီးယားမှာ ကျနော် စောင့်ကြည့်လေ့ရှိတယ်။ ဘိုးတော်က မှတ်စုတစ်ခုတော့ အမြဲကိုင်ထားတယ်။ တစ်ခါဗျူးရင် တော့ပစ်သုံးခုလောက် ကမ္ဘာ ပတ်ဗျူးတယ်။ နာဂစ်အလွန်တုန်းက ဂျာမန်သတင်းဌာနတစ်ခုက လှမ်းဗျူးတာလည်း သတိရတယ်။ အင်္ဂလိပ်လို ပြောကြပေမယ့် အထစ်အငေါ့ မဖြစ်ဘူးပါ။ အခုကျမှ ဘယ်ရောက်လို့ ဘာဆက်မေးမှန်းမသိ၊ မေးခွန်း ပြန်ကျော့တာကလည်း အတော် ဆိုးပါတယ်။ အရင် မီဒီယာတွေနဲ့မေးကြ မြန်းကြတုန်းက ဒီလို မဖြစ်ခဲ့ဖူးဘူး။ (မမေးမြန်းခင် မေးလိုသူရဲ့ လိုချင်တဲ့ အကွက်နဲ့ ဖြေလိုသူရဲ့ ရပ်တည်မှုနေရာဟာ အရေးတကြီး ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ သင်ခန်းစာ ရလိုက်တယ်။)
လာကြည့်သူ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ သိရင် လူတွေ သိမသိ အကဲဖြတ်လို့ရပြီလို့ နားလည်နိုင်ပါတယ်။ မသိတဲ့သူတွေ ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာ ဆက်မေးဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ ဘလော်ဂါနဲ့ ဘလောဂ့်ဖတ်သူ အကြမ်းဖျဉ်း ဦးရေကို မှန်းလို့ရပြီပဲ။ မြန်မာပြည် လူဦးရေ သန်းငါးဆယ်ကျော်လုံးတော့ ဘလော့ဂ်အကယ်ဒမီကို စိတ်မဝင်စားတာ သေချာပါတယ်။ အင်တာမဗျူးခင်မှာ ကျုပ်ကလည်း အချင်းချင်းခြေမြင်နိုင်တဲ့ ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြောမထားခဲ့ပါဘူး။ ပြောဖို့လည်း လိုတယ် မထင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း အပေါက်ဝက ဂိတ်စောင့်လောက်သိတာပါလို့ စကားခင်းခဲ့တာကို အထဲရုံးက ဥက္ကဌတာဝန်တွေမေးတော့ အိုးနင်းခွက်နင်း၊ မဖြေချင်တာတွေ တုံးတိတိပြော၊ မေးသင့်တာတွေကျတော့ မမေး၊ ဘယ်ရှုထောင့်က ချဉ်းကပ်မှန်းမသိ လုံးချာလိုက်ပြီးသကာလ “အင်း…ဒါဗျူး”ဆိုပြီး ကိုယ်စီ ပုံဖော်ကြတဲ့ အင်ဖော်မေးရှင်းရုပ်လုံးတစ်ခု ဖြစ်ရတော့တာပါပဲ။ သင်ကာ
← Unicode and … Unicode	The Art of Living →	0 comments on “In…dar view !!!”
ထြန္းေတာက္ေန on December 30, 2008 at 10:37 am said:
ဟ…ေတာ္ေတာ္ဆိုးတဲ့ အင္တာဗ်ဴးသမားပါလားဗ်။ ႀကိတ္လုိက္စမ္းပါ ကိုသင္ကာေရ…
hana san on December 31, 2008 at 5:28 am said:
wanna interview you.🙂
MhawSayar on January 1, 2009 at 4:43 pm said:
တယ်ဆိုးတဲ့ အင်တာဗျူဝါ ပါလားဗျာ. ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မှတ်မှတ်သားသားတော့ ရှိသွားပြီပေါ့.🙂
Myanmar Sar	Blog Stats	254,651 License	MM Free Thinker by mm thinker is licensed underaCreative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.Based onawork at mmfreethinker.wordpress.com.Permissions beyond the scope of this license may be available at https://mmfreethinker.wordpress.com/. Myanmar Knote Credit-Art House Graphic Studio, Mandalay, Myanmar. Createafree website or blog at WordPress.com.